Ụzọ na-Send SMS si Mac ka ekwentị mkpanaaka na
1 Ozi Management
1.1 Back & Weghachi SMS
1.2 Free SMS nrụọrụ
1.3 Send / Anata Ozi na PC
1.4 Send Amaonye Ozi
1.6 Gbochie Spam Ozi
1.7 Gaanụ n'Ihu Text Ozi
1.8 Track Ozi
1.9 encrypt Ozi
1.10 Gụọ Ozi
1.11 Get Ozi Records
1,12 Zoo Ozi
1,13 Ịtọ oge Ozi
1,14 Naghachi Sony Ozi
1,15 izipu ozi site na Mac
2 iPhone Ozi
2.1 Idozi iPhone Ozi Issues
2.2 Save iPhone Ozi
Ma gụọ 2.3 Bipute iPhone Ozi
2.4 Hichapụ iPhone Ozi
2.5 Naghachi iPhone Ozi
2.6 Naghachi iPhone Facebook Ozi
2.7 Chọọ iPhone Ozi
2.8 iPhone ka Android SMS transfer
2.9 Nyefee iPhone SMS
2.1 ndabere iMessages
2,11 View iCloud Ozi
2.12 iTunes Ozi
3 Anroid Ozi
3.1 Export Android Ozi
3.2 Ozi ngwa ọdịnala n'ihi Android
3.3 Naghachi Android Ozi
3.4 Naghachi Android Facebook Ozi
3.5 Send Android SMS on PC
3.6 Nyefee Android SMS
4 Samsung Ozi
4.1 Bipute Samsung Ozi
4.2 Naghachi Samsung Ozi
4.3 Samsung SMS Iweghachite
4.4 Nyefee Samsung Ozi
4.5 Naghachi Samsung Ace SMS
Ma ị kwere na ya ma ọ bụ, ugbu a ndị mmadụ na-enwe ike izipu SMS site na kọmputa na-igwe. Na ndị ọzọ na isiokwu, ndị nchịkọta akụkọ ka e kwuru otú iziga ozi ederede na a PC. Ugbu a, m ga-amasị ịme ka ị otú iziga ozi ederede na Mac. N'ezie, ụzọ izipu ozi ederede na Mac dị iche iche dị ka ihe ụdị ekwentị ị na-eji. Isiokwu a na-elekwasị anya:
Part1: Olee izipu ozi ederede site Mac mgbe ị na-eji ihe iPhone
Part 2. Olee izipu SMS si Mac mgbe ị na-eji ihe Android ekwentị
Part 1. Olee izipu ozi ederede site Mac mgbe ị na-eji ihe iPhone
Ọ bụrụ na ị na-eji ndị ọhụrụ iPhone 6s, iPhone 6s Plus ma ọ bụ ihe ọ bụla mbụ iPhone nke bụ ike na-agba ọsọ ndị ọhụrụ iOS 9.0, na gị Mac ga-OS X 10.11 (El Capitan), mgbe ahụ ị na-ike izipu SMS Mac . Lee ndị iji melite gị Mac izipu na-enweta ozi ederede na Mac.
Nzọụkwụ 1. Biko imelite gị iPhone ka iOS 9.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị; Naanị na iOS 9.0 ma ọ bụ ndị ọhụrụ version, ị nwere ike ịtọ gị Mac na-enweta ma ọ bụ zipu ozi ederede.
Nzọụkwụ 2. Jide n'aka gị Mac na gị iPhone na-ejikọrọ na otu netwọk Wi-Fi.
Nzọụkwụ 3. Sign gị iPhone iCloud na gị Apple ID na banye na gị Mac iCloud na otu Apple ID.
Nzọụkwụ 4. On gị iPhone, pịa Ntọala> Ozi> Text Ozi ebugharị, swipe nhọrọ NA. Biko mara na ọ bụ nanị mgbe e nwere dakọtara iOS ngwaọrụ ma ọ bụ Mac ejikọrọ na otu netwọk Wi-Fi, nhọrọ ga-apụta. Site n'ebe ahụ, ị ​​kwesịrị ị na Toggle Mac dị ka na ngwaọrụ ịchọrọ ozi zijere.
Nzọụkwụ 5. Mgbe ị họrọ gị Mac dị ka ngwaọrụ ka ibugharịa ozi, a nkwado arịrịọ a ga-eziga, ha na a isii-dijitalụ ozugbo na Ozi maka Mac. Tinye passcode na gị iPhone ejikọ gị iPhone na gị Mac, ikwe maka nnata na-ezite SMS na MMS ozi.
Ọ bụ ya! Mgbe ị melite gị iPhone na gị Mac dị n'elu ka nzọụkwụ kwuru, ị nwere ike mfe izipu ozi ederede site na gị Mac. Ọ na-metụtara gị iPhone iMessage na iPhone nọmba.
N'adịghị ka Apple, Google adịghị nye gị n'ụzọ ọ bụla iji zipu SMS si Mac mgbe ị na-eji ihe Android ekwentị. Luckily, na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, ị nwekwara ike izipu ozi ederede site Mac. N'okpuru ebe a bụ nkọwa maka otú iziga SMS si Mac na Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac).
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) na gị onwe gị Mac. Ọ bụ a virus-free ngwá ọrụ. Dị nnọọ na-eche free wụnye ya. Mgbe ahụ, ẹkedori ya na jikọọ na gị Android ekwentị gị na Mac site ya dijitalụ USB. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ gị Android ekwentị na achọpụtara site Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac).
Nzọụkwụ 2. Pịa SMS na ekpe sidebar aka-eziga ozi ederede window. Si n'akụkụ aka nri, ị pụrụ ịhụ niile ozi ederede na-egosipụta. N'elu, e nwere bọtịnụ na-akpọ 'New'. Pịa ya, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta a ọhụrụ ederede ozi zipu site Mac. Izaghachị a mpempe ozi ederede, pịa ozi, mgbe ahụ, i nwere ike pịnye na New ọmụma na ala n'aka nri nke window.
4 Mfe Nzọụkwụ naghachi ehichapụ Facebook Ozi na iPhone / iPad / iPod aka
Adobe Photoshop CS5 Extended ikpe Mac
Top 5 Solutions nyefee Music si Mac ka iOS 7
Mp3tag maka Mac: Olee Otú Ị Pụrụ Dezie Tag Ozi maka Music on Mac
Movie Editor maka Mac: Sinụ Best Movie Editor maka Mac
ImgBurn Mac? Download ImgBurn maka Mac (El Capitan gụnyere) Alternative maka Free
iMac Photo Recovery: Olee naghachi ehichapụ Photo si iMac
> Resource> Mac> otú iziga ozi ederede site na Mac ka ekwentị mkpanaaka na